Solar Energy [Archive] - မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ်
မြန်မာအင်ဂျင်နီယာဖိုရမ် > အင်ဂျင်နီယာနယ်ပယ် > အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာပညာ > Solar Energy
View Full Version : Solar Energy
Solar Energy အကြောင်း သိချင်ပါတယ်။Solar ကို Dryer အနေနဲ့ ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးလို့ရလဲ။သိတဲ့သူတွေ ဝေမျှပေးပါအုံး။
ကျနော်သိတာကတော့ နေစွမ်းအင်ကို နည်း(၂)နည်းသုံးတာဗျ-
၁။ နေရောင်ခြည်ရဲ့အပူစွမ်းအင်ကို တိုက်ရိုက်စုစည်းပြီး အသုံးချတာ ။ ဥပမာ - မှန်အခွက်(Concave mirror) တွေ နဲ နေရောင်ခြည်ကို တစ်နေရာတည်းမှာစုဆုံအောင်လုပ်ပြီး ရေနွေးဘွိုင်လာကို အပူပေးတာ။အဲဒီကထွက်တဲ့ ရေနွေးငွေ့ကို တာဘိုင်ဒလက်တွေကို လှည့်တယ်။
၂။ ဖိုတိုဗို့လ်တေ့ခ်ျဆဲလ် (Photovoltaic cell) တွေအသုံးပြုပြီး နေရောင်ခြည်ကနေ လျှပ်စစ်စွမ်းအင် ပြောင်းလဲအသုံးပြုတာ။
by batool on August 9, 2009
in Energy Conservation, Interesting, News, Solar Energy, Solar Water Heating, electricity, environment
The Sun, our nearest and the biggest star, is the biggest source of energy to us. Sun energy or the solar energy has been in use since the time human existed on the earth. Solar energy is our essential need and we need it naturally to make our life work properly. Sun hasalot of stories and histories attached to it, for most of the humans of the world, Sun is God, it isaHoly part of religion to many tribes like the American Native Tribe, it is also worshipped by the Greek people, where as many other religions like Hinduism, Buddhism, Zoroastrianism and Druids of England take Sun as the priority of their religion. solar-energy-storage-battery
Today we know that solar energy is highly important for us and without it we would not be able to live our lives. Through sunlight our food grows on earth and the animals eat the food, and the circle goes on that we have learned in our previous post. we need solar energy to get our work done from inside home to outside there in the factories and industries. The old fossil fuels is also one form that hasalot of sunlight energy trapped in it. In short the Sun and also other stars are responsible in providing us energy. we said all stars as the uranium atoms we use in the nuclear energy was created in the star explosion. We can use solar energy in different methods to get our work done in proper way. here are some briefly described methods in which we can use the solar energy.
in old times in America, the sun water heaters were used to get warm water inside homes and for businesses. This method to get warn water is old and it was affordable for most of the people. With the growth in time, and the mechanical facilities where created for human use. solar water heater The solar water heaters then gradually were replaced by electric heaters that uses fossil fuels. These solar water heaters covered most of the places in America, but later with the discovery of large deposits of natural gas and oil in United States the solar water heaters totally were replaced by heaters burning with fossil fuels. Today again the solar water heater method has returned, most of the homes in California uses this equipment to heat the water that supply at homes and other business places. this method is also used to heat the water in swimming pools and panels of the buildings to get warm water.
Solar Thermal Electricity:
Of course solar energy can be used in creating electricity. one good example of California Mojave Dessert can explain the method of how solar energy can be used in creating electricity. in the solar power plant, one big curved mirror is used of which the central point is running pipeline. the central point of the mirror focuses on the pipeline so that the heat it receives heats the pipe as well, this pipe gets so hot that can turn water into steam and the steam can be used in moving turbine to create electricity. the solar power plants usealot of mirrors above the pipelines to get heat and then create electricity. but these solar power plants are partially useless since they only make electricity in the daytime and night they are not capable to create electricity. These solar power plants are turned into hybrid as they can work only in daytime and in time they work by natural gas burning so that electricity doesn’t go low at any time. another part is Central Tower Power Plant that is also capable to light up 10,000 electricity. in this case of central tower power plant scientists say that if larger plant is built it can supply electricity that can be sent to 100,000 to 200,000 homes.
solar energy can be used in converting the solar energy directly into solar cells. this method carries sunlight directly and the method can be best used on billboards or turning on the appliances at homes and offices.
A solar oven or solar cooker isadevice which uses sunlight as its energy source. Because they use no fuel and they cost nothing to run, humanitarian organizations are promoting their use worldwide to help slow deforestation and desertification, caused by using wood as fuel for cooking. Solar cookers are also sometimes used in outdoor cooking, especially in situations where minimum fuel consumption or fire risk are considered highly important.
နေစွမ်းအင်သုံး မီးဖို လေးတွေ က လုပ်ရလည်း လွယ်ပါတယ်။ လက်တွေ့လဲ စမ်းသပ်လို့ ရပါတယ်။ မြန်မာပြည် အလည်ပိုင်းသားတွေ အတွက် ပို့ သင့်လျော်ပါတယ်။ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ ကျောကော့အောင်ပူနေတဲ့ နေမင်းကြီးကို ပြန်ပြီး ခိုင်းစားကြတာပေါ့ဗျာ။
ဒီမှာ ၀ါသနာရှင်တယောက်လုပ်သွားတာပါ၊ ဂြိုဟ်တုစလောင်းတွေနဲ့ Solar Cooker လုပ်သွားတာ။ နေအတက်၊ အကျပေါ်မူတည်ပြီး စလောင်းကို မော်တာတွေနဲ့ ချိန်ပေးလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ အိုင်ဒီယာက ကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မီမရှိရင် ခက်သလို၊ ကုန်ကျစရိတ်များပါတယ်။ Efficiency တော့ ပိုကောင်းပါတယ်။ လျှပ်စစ်ကိုလည်း Solar Panel နဲ့ ပြန်ထုတ်ရင်တော့ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ စမတ်ကျကျ ခေတ်မှီတဲ့ ၀ါသနာရှင်တွေ အတွက်ပါ။ http://www.greenoptimistic.com/2008/09/08/how-to-build-solar-furnace-satellite-dish/
လှတပတ လေးပါ။ ဒါမျိုးလေးတွေ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖို့ မခက်ပါဘူး။
လက်တွေ့ စမ်းကြည့်ချင်သူတွေ အတွက် ဒီဇိုင်း စုံ ဖော်ပြထားတဲ့ ဆိုဒ်တွေပါ။ များလွန်းလို့ ရွေးတောင် မပေးနိုင်တော့ပါဘူး။ Solar Hot Pot တောင်ပါသေးတယ်။
အလွယ်ဆုံး အိမ်တွင်းဖြစ် Solar Cooker ဖြစ်ပါတယ်။ ၀ါးခြင်းတောင်းထဲမှာ စတီးလင်းပန်း ခြောက်ချပ် ထဲ့တားတာပါ။ အပေါ်အ၀ကို ပလပ်စတစ်အုပ်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ မူရင်းက အိန္ဒိယသူတွေအတွက် ထွင်ထားတာပါး။
ရွှေမြန်မာတွေအတွက်တော့ ပိုလွယ်ပြီးထိရောက်အောင် နွေဦးကို အကြံပြု ပါရစေ။
ရွှေမြန်မာတွေ အတွက် နေရောင်ခြည်သုံး မီးဖို
၁။ ၀ါးခြင်းတောင်း ပက်ပက် တလုံး
၂။ ငွေရောင် စက္ကူလိပ် (အခမ်းအနား၊ ဘုရားပွဲတွေမှာ သုံးကြတဲ့ ရွှေစက္ကူ၊ ငွေ စက္ကူပါ)
၃။ ပလပ်စတစ် အကြည်စ တစ်စ
၀ါးခြင်းတောင်း အတွင်းဘက်ကို ငွေစက္ကူ ကော်ကပ်ပြီး အပြည့်လိုက်ကပ်ပါ။ ခြင်းတောင်း အပြင်ဘက်ကို ရွှံ့နဲ့ ကျံလိုက်ပါ၊ အပူလုံအောင်လို့ပါ။ တချို့နယ်တွေမှာ ရွှံ့နဲ့ နွားချေးရောကျံပါတယ်။ ပိုကောင်းတာပေါ့။ မြို့ပေါ်မှာ ရွှံ့မရရင် တော့ ပလာစတာ (ပတ်တီး) နည်းနည်းကိုင်ပေါ့။ အပြင်ဘက်က ဆေးအမည်း သုတ်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြီးရင် နေပူထဲထုတ် ချက်မယ့် ပြုတ်မယ့် အိုးထည့်ပြီး အပေါ်က ပလပ်စတစ်အုပ်ပြီး ကြိုးစည်းထားလိုက်ပါ။ ၁ နာရီခွဲလောက်ဆို ဟင်းတော်တော်များများ ကျက်နေနိုင်ပါတယ်။
၁။ ခြင်းတောင်းက အခွက်ပုံစံမို့ ဗဟိုမှာ အပူစုစည်းမှု ပိုများပါတယ်။
၂။ အပြင်က ရွှံ့နဲ့ နွားကျေး ရောကျံတာက အပူဆုံးရှံးမှုကို သိသိသာသာ လျော့နည်းစေပါတယ်။ တောနယ်တွေမှာ နှမ်း၊ မြေပဲ၊ ထန်းလျက် လှောင်တဲ့ ပုတ်တွေကို ဒီလိုပဲ ကျံထားလေ့ ရှိပါတယ်။
၃။ အပြင်ဘက်က အမည်းရောင်သုတ်ထားတာက အပူစုပ်ယူမှု ပိုမို များစေပါတယ်။ ပလစ်စတစ် အကြည်နဲ့ အုပ်ထားတာကလည်း အပူကို ထိန်းထားနိုင်ပါတယ်။
၄။ ကုန်ကျစရိတ် အလွန့်အလွန် သက်သာပြီး၊ ဒေသန္တရ ပစ္စည်းတွေနဲ့ သုံးနိုင်တာမို့ ဒီထက်ကောင်းတဲ့ ဒီဇိုင်းရှိရင်တောင် သူ့လောက်ကောင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်၊ နွေဦးကို အနေနဲ့ ၀ါးခြင်းတောင်း အလွယ်တကူ ရှာမရလို့ နမူနာ လုပ်မပြနိုင်တာကို နားလည်ပေးပါ။ ၀ါးခြင်းတောင်းရဲ့ Parabolic Shape ကိုတော့ နေရောင်ခြည်စုစည်းမှုပိုကောင်းအောင် ပြုပြင်ဖို့ လိုပါတယ်။
03-18-2010, 11:11 PM
www.okmyanmar.com အဲ့ မှာလဲပြောထားတယ်နော်
ကျွန်တော်တို့ လျှပ်စစ်မီးသုံးနေ၇တဲ့အဖြစ်ကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကွန်ပျူတာကိုမီးနဲ့သုံး၇၇င်ဘယ်အချိန်မီးပျက်မလဲ မီးပျက်မလဲ အဲဒီလိုတွေးပူနေ၇တယ်။ ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့၇ပ်ကွက်မှာ 10 နာရီနောက်ပိုင်းမှမီးလာတယ်
ပြီးတော့5နာ၇ီမထိုးခင်သေသွားတယ်။ အဲဒီအဖြစ်ကအားလုံးကိုသက်ဆိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စကားပုံ က လသာတုန်းဗိုင်းငင် အခုစကားပုံကပြောင်းသွားပြီ မီးလာတုန်းေ၇တင်တဲ့။ အဲဒီအတိုင်းပဲ ကျွန်တော်တို့၇ပ်ကွက်မှာ
ည 12 အချိန်မှာေ၇ထတင်ကြသဗျာ။ အဲဒီညမအိပ်တော့တာတော့အမှန်။ မနက်ကျမှ ခေါင်းမူးတယ်ခေါင်းကိုက်တယ်ဆိုပြီးဘာဖြစ်လဲပေါ့။ ညတုန်းကအိပ်မှမအိပ်ဘဲကိုး (ေ၇တင်နေတာနော်)။
ဒီဆိုဒ်ကကျွန်တော်တို့ အလကား၇တဲ့ Solar Energy အကြောင်းကိုဆွေးနွေး ကြမယ်။ Solar Energy ကိုအိမ်မှာလုံလုံလောက်လောက် သုံးစွဲနိုင်တဲ့အထိဘယ်လိုလုပ်၇မလဲစသဖြင့်ပေါ့။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ အ၇မ်းလုပ်ချင်တယ်။
ဒါပေမယ့်လုပ်မတတ်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းလုပ်တတ်သွား၇အောင် လုိ့ဒီဆိုဒ်ကိုဆွေးနွေးဖို့တင်လိုက်တာပါ။ သူငယ်ချင်းများ အားလုံးကူညီကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
သိတဲ့လူတွေကလည်းဆက်ဆွေးနွေးပေးပေါ့။ ကျွန်တော်တို့လျှပ်စစ်မီးငတ်မွတ်ခေါင်းပါးခြင်းဘေးက နေလွတ်ကင်းအောင်ကူညီမစပေးကြပါ အင်ဂျင်နီ၇ာကြီးများခင်ဗျား။
ဒီဆိုဒ်ကိုဝင်ေ၇ာက်ဆွေးနွေးပေးကြသော ၀ါသနာရှင် ပညာရှင်အပေါင်းကိုအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အင်း နည်းနည်းလေးသိတယ်။ အိမ်မှာသုံးနိုင်လောက်အောင် ဆိုရင်တော့ အကုန်အကျ အတော်များမယ်ထင်တယ်၊ PV (Photo Voltic Cell ) 74 watt ထွက်တဲ့ (1.5 ပေ*4 ပေ) တချပ် ကို မြန်ကျပ်ငွေ (၅)သိန်းဝန်းကျင်၊ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးအတွက် အနည်းဆုံးနှစ်ချပ် (150w) ပျမ်းမျှ ရှိမှ (150AH) Battery ကို (10) နာရီအားသွင်းနိုင်မယ်၊ တစ်ကယ်တမ်းက 20 နာရီသွင်းမှ ပြည့်မှာပါ၊ နောက် AC Sine Wae ထွက်တဲ့ Inverter ကလည်း အတော်ဈေးကြီးပါတယ်။ (ဒါမှ Electric Motor လိုပစ္စည်းတွေသုံးလို့ရမှာပါ)၊ ရိုးရိုး Inverter တွေ (Spkie Free, Step Sine Wae,) အားလုံး က SQuare Wave ဘဲထွက်လို့ မော်တာ နဲ့ အခြား Induction Load တွေသုံးရင် အဆင်မပြေနိုင်ဘူးလေ၊ နောက် Battery ဈေး၊ Battery သုံးတဲ့အတွက် Matainace Fee? Investment အတော်ကြီးပါတယ်။
Solar အကြောင်း ဆွေးနွေး တယ် ဆို လို့အချိန်လေး ၇ တုန်း ဝင်ေ၇ာက် ဆွေး နွေး တာ ပါ. ဒီ ဆိုဒ် ကို မဝင် ဖြစ် တာ လည်6းလ ပြည့်တော့မှာ မို့ အားလုံးကိုလည်း သတိယ ပါ တယ်။ ခဏ တာ မြန်မာ ပြည် ပြန် သွား တဲ့ အတွက် မဝင် ဖြစ် တာ လဲ ပါ ပါတယ်။ အခု က ကျွန်တော် ကိုယ် တိုင် ဆိုလာ တွေ ကို တပ် ဆင် ပေး နေ ပါ တယ် ။ customer တွေလည်း နည်းနည်း တော့ ၇ နေ ပါ ပြီ ။ အပေါ် က နောင် ကြီး ပြော သလိုပါ ပဲ ဈေး နှုံး က တော့ နည်းနည်း ကြီး ပါ တယ် သို့ သော် မီးစက် တလုံး ထက် စာ ၇င် အများ ကြီး အသုံး သင့် ပါ တယ် လေ ထု ညစ် ညမ်း မှူ ကိုလည်း ကာကွယ် ၇ာေ၇ာက် ပါတယ် အသံထွက်လည်း သက် သာ တဲ့ အတွက် ပတ်ဝန်း ကျင် ကို ဒုက္ခပေး ၇ မေ၇ာက် တော့ပါဘူး။ ကွန်ပြူ တာ တစ်လုံး၊ printer တစ်လုံး နဲ့Lighting 80 Watt လောက် အတွက် က တော့ အဲ ဒီလောက် ငွေကုန် စ၇ာ မလို ပါဘူး။ ကျွန်တော် တို့ လက် တွေ့ စမ်း သပ် ချက် အ၇ တော့ 80 Watt ထွက် တဲ့ panel တစ်ချပ် ၇ယ် ။ charge controller ၇ယ် ပြီးတော့90 Ah ( or ) 100 Ah ဘတ်ထရီ တလုံး ၇ယ် ။ AC only Inverter တစ်လုံး၇ယ် ဆို လုံလောက်ပါ ပီ အဲဒီ အတွက် ကျွန်တော် တို့က ပင် နယ် အတွက် 15 နှစ် အာ မခံ နဲ့ အပြီး အစီးကို 650000 ကျပ် နဲ့ တပ် ဆင် ပေး နေ ပါတယ် ။ လို အပ် တယ် ဆို ၇င်လည်း ဆက်သွယ် နိုင် သလို ၊ လက် တွေ့ လေ့ လာ ချင် တယ် ဆို၇င်လည်း လာေ၇ာက် လေ့ လာ နိုင် ပါ တယ်။ ကျွန်တော် နေရာ က တော့ ၇န်ကင်း စင်တာ နားမှာ ပါ။ ဖုံးနံပါတ် ပေး ထားပါ့ မယ် . လို အပ် ၇င် မှာ နိုင်ပါတယ်...
09 49272418 , 0973054948
solar နဲ့ ပတ်သက်လို့ 
ကျနော်တို့ok myanmar showroom မှာပြသထားပါတယ်
ဈေးနှုန်းလဲအတင့် အသင့် ပဲရှိပါတယ်
ဖုန်းနံပါတ် 256501 ကနေ06ထိဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှန်
05-22-2010, 11:32 AM
အပေါ်ကအစ်ကိုပြောသွားတာကတော့အား၇စ၇ာပဲ။ ဒါနဲ့အဲဒါကိုနေ့ဘက်ေ၇ာညဘက်ေ၇ာသုံးလို့၇လား။ နေ့ဘက်ဆိုဘယ်လိုသုံးပြီးညဘက်ဆိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာပြောပြပေးပါလား။
နေ့ဘက်မှာဆို ဘက်ထ၇ီကိုအားသွင်း၇င်း panel နဲ့ Inverter ကိုတိုက်ရိုက်တွဲပြီးသုံးတာလား။ ဒါမှမဟုတ်(ကျွန်တော့်အထင်) ဘက်ထ၇ီက်ိုကြားခံအဖြစ်သုံးပြီးအားသွင်း၇င်းတစ်ပြိုင်နက် သုံးသွားသလားပေါ့ဗျာ။
ပြီးတော့လည်းသူကတိမ်ထတူတာတို့ မိုးအုပ်တာတို့ဆို၇င် ဗို့အား ကိုအပြည့်ထုတ်ပေးနိုင်ပါ့မလား။ ကျွန်တော့်အထင်တော့လျော့သွားမယ်လို့ထင်တယ်။
အဲ ညဘက်မှာလည်းဘက်ထ၇ီကဘယ်နှစ်နာ၇ီလောက်ခံသလဲ။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးနဲ့ 40W မီးချောင်းတစ်ချောင်းဆို၇င်ပေါ့။ အင်ဗာတာ ဆိုလည်းဒီဈေးကွက်က၇နေတဲ့ ရိုးရိုး အင်ဗာတာတွေနဲ့သုံးလို့၇လားခင်ဗျာ။
ကျွန်တော့်အထင်တော့မ၇ဘူးထင်တယ်။ အဲဒီကောင်နဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာဖွင့်တာ မ၇ဘူးဗျ ဘာဖြစ်လို့လဲတော့မသိဘူး။
ဒါပေမယ့် ဆိုလာ တွေကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သုံးနိုင်လို့ရှိ၇င်တော်တော်ကောင်းတာပဲ မီးစက်နဲ့စာ၇င်ပေါ့။
ဆိုလာ နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ဗဟုသုတလေး တွေ ကို ဒီ forum မှာ တက်နိုင်သမျှ ဝင်ရောက်ဆွေး နွေး စေလို ပါ တယ်၊ ဘာ ဖြစ်လို့ လဲ ဆို၇င် ကျွန်တော် တို့ မြန်မာ နိုင်ငံ မှာ လျှပ်စစ် စွမ်းအင် သုံး စွဲ မှု မှာ မရှိမဖြစ်လို အပ် နေပါတယ်၊သို့ဖြစ်ပါ၍ ဆိုလာ စွမ်းအင် သုံး ဆွဲ ခြင်း ဖြင့် လျှပ်စစ်ပစည်းများကို ပိုမ်ိုအသုံး ပြု လာနိုင်ခြင်းအားဖြင့် နယ်ေ၇ာ မြို့ ပါ လူမှူ အဆင့်အတန်း မီ နေထိုင်လာ နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်၊ ယခု အခါတွင် communication အရ နယ်ရော မြို့ ပါ အသုံး ချလာ နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်၊ သို့ပါ၍ လျှပ်စစ်ပစည်း များကို power ပေး နိုင်ဖို့ အတွက် ဆိုလာ စွမ်းအင် သည် အသုံး ဝင်သော power ကို အမှန်တကယ် ပေး နုိင်သည်မှာ သေချာ ပါသည်. သို့ အတွက် ကျွန်တော်တို့ အနေ နဲ့ ဒီ forum လေး မှာ ဗဟုသုတ ဖလှယ် ခြင်း ဖြင့် မြန်မာ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားအား လုံး ဆိုလာ စွမ်းအင် သုံး စွဲ ခြင်းကို ပိုမို နားလည်လာနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ လို အပ်သောတွက်ချက် လေ့လာ မှူ နဲ့ ဒေ သပထဝီ အနေ အထားကို သိရှိလိုပါကလည်း အချိန်မရွေး မေး မြန်း နိုင်ပါကြော င်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်၊
09 49272418 , 09 73054948